Gudiga hogaaminta banaanka ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya suuqa darbiga la hogaaminayo.Waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa suuqan kadib markii aan helnay amarro fara badan oo banaanka ah.
Maxay tahay sababta guddi bannaanka ka ah oo qayb weyn ku leh suuqa Maaha oo keliya sababta oo ah dad aad u tiro badan oo u isticmaala halkii ay ka qaadan lahaayeen kaarka xayaysiinta ama LCD laakiin sidoo kale sababta oo ah qiimaha guddi dibedda laga hagayo ayaa hoos u dhacday.
Si kastaba ha noqotee, guddiga furan ee P5 wuxuu caan ku yahay macaamiisha inta lagu jiro suuqa dibadda ee hogaaminaya.Waxaa soo jiitay xallin sare iyo faa'iidooyinka adeegga hore, qaar ka mid ah kuwa xayeysiinta ah xitaa way yimaadaan halkaas oo ay nagu soo booqdaan si ay u arkaan saameynta fiidiyowga.
Macaamiil aad iyo aad u tiro badan oo jecel inay u doortaan wax soo saar sare oo nadiif ah mashruuciisa.Waa isbedelka suuqa guddi hogaamineed.Tani sidoo kale waa sababta P5 ay caan ugu tahay suuqa banaanka, P5 gudiga banaanka ayaa door door ka ciyaara suuqa. iyadoo la horumarinayo suuqa dibedda, P5 ayaa soo jiidan doonta indho badan mustaqbalka.